ကျမရဲ့နေရာလေး: မြို့ ရောက်တုံးအလှူတကာဝင်နွဲခဲ့တာပေါ့...
မနှစ်ကဆောင်းရာသီကာလ ၄ လတာအချိန် ကတော့ကျမအတွက်တသက်မမေ့နိုင်တဲ့ အမှတ်တရ၊
နှစ်ပေါင်း ၂၄ နှစ် တောင်ဝေးနေခဲ့ရတာ..။ သူများတွေလိုလည်းလူရာဝင်ချင်သေးတယ်လေ..။
အလှူဆိုတာ လှူတဲ့နေ့ မှာဘဲစားရတာဟုတ်ဘူးလေ...။
အကူနေ့ ဆိုတာရှိသေးပါတယ်။ ကြက်သွန်လေးခွါ(ဓါးတိုလေးတွေကို ကိုယ့်အိမ်ကနေကိုယ်
ခါးညားလေးညှပ်လို့ ယူသွားတတ်ကြတယ်)ကူလိုက်၊ ခရမ်းချဉ်သီးဆေးကူ၊ပုဂံလေးဆေး..ဘာညာညာပေါ့။
တပတ်မှာ အလှူတွေအနဲဆုံး ၂ ခုလောက်တော့ အိမ်မှာဖိတ်စာရောက်တယ်။
အဲဒါနဲ့ ..ကျမလေ..သိလား..အမျိုးတွေတွေ့ ရင်..နင်တို့ အလှူမလုပ်ဘူးလား..။
အဲဒီအချိန်မှာ ဝမ်းကွဲ မောင်(အင်း..ရက်ပိုင်းခြားတယ်လို့ ပြောကြတယ်၊သူကကြီးလားကျမကအကြီးလား
ဒီမှာလေ..မီးနေချိန်မှာ သွားမကြည့်၊မလည်ထားဖူးဆိုရင်၊ ကင်ပွန်းတပ်မဖိတ်ဘူးတဲ့ဆရာ...။
အဲဒါ ဆေးရုံကဆင်းပြီး ကင်ပွန်းတပ်ခါနီးမှာ ကမန်းကတန်း(တနင်္ဂနွေနေ့ )မှာ သွားလည်ရသေးတယ်..။
ဆောင်းချမ်းချမ်း ဆိုင်ကယ်တဝှီးဝှီးနဲ့ လေတိုးလိုက်တာ..။
ရောက်တာနဲ့ တိုးခွေ့ ပြီးတန်းထိုင်စားတော့တာဘဲ..။အားလုံးက ဝိုင်းပြီးနှုတ်ဆက်တာ ပေါ့။
ခပ်မှောင်မှောင်...မှာဖုံးနဲ့ ဘဲကမန်းကတန်းရိုက်ရတာ...။သူတို့ ကအော်ဟစ်နေကြတယ်။
ကျမက ဆွေမျိုးရင်းဖြစ်ပြီး ဝင်တီးနေလို့ ..အဟဲ..။
တွေ့ လား..မဲမဲကြီးက နမ့်ပူ(လယ်ဂဏန်းထောင်း)၊သူ့ နဘေးက ကောင်းကောင်းမသဲကွဲဘူး..၊
အဲဒါက ခရမ်းချဉ်သီးထောင်း..။ခပ်နီနီလေးက ခိ့ပါ(ငါးအစိမ်းကိုတကောင်လုံးတောက်တောက်စင်းပြီး၊
ရှမ်းအမွှေးအကြိုင်အရွှက်ပေါင်းစုံနဲ့ အချဉ်တည်၊ပြီး ပြန်ကြော်ထားတာ)၊ဆားငံဘဲဥ၊ကြက်သားကင်..၊
ကျမရဲ့ ခေါက်ဆိန့် ပန်းကန်...ကောက်ညှင်းလေးနဲ့ ခိ့ပါတို့ ၊တချက်လောက်ဝါးပြီး ခေါက်ဆိန့် တကော်
ကျမလည်း ပါးစပ်ကပလုတ်ပလောင်းနဲ့ ..ဟီးဟီး..။
ကူတဲ့နေ့ ကဘာလို့ မလာလဲ..ဆိုပြီးပေါင်တွင်းကြောလာလိမ်တဲ့ ကြီးဒေါ်လည်းရှိသေးဗျား...။
မအားလို့ ပါ..အခါတသောင်းလောက်ရှင်းပြပေးပြီး၊ အားနာပါးနာနဲ့ ခလေးကိုတချက်ဓါတ်ပုံရှိက်ခဲ့ပါတယ်။
အောက်ထပ်အပြင်ဖက်မှာ ပြင်ဆင်နေတာဓါတ်ပုံရိုက်မလို့ ၊ကင်မရာထုတ်ချိန်တောင်မရှိဘူး..ဝိုင်းအော်
နေကြတာနဲ့ ၊ တာတာ...ဆိုပြီးဆွေမျိုးတသိုက်ကြားထဲကနေလွားကနဲလွားကနဲ..ထွက်ပြေးရတာပေါ့..။
ရှမ်းလို စေ့ပ်ဂျိုင်းတာ..ဆိုတော့ ဇာတာဆက်တာပေါ့..ကဲ..ဒီလိုဘဲမှတ်ထားလိုက်ပါ..။
ဒီက ခဏခဏ စေ့ပ်ဂျိုင်းတာ လုပ်ကြတယ်..။ လန်းနားရှမ်း၊ဂုံရှမ်းထုံးစံပေါ့..။
ဘုန်းကြီးက ပရိတ်ချည်ကြိုးကို စေ့ပ်ဂျိုင်းတာလုပ်တဲ့သူထိုင်တဲ့အပေါ်မှာ( ညောင်ထောက်တဲ့တိုင်၎ တိုင်ကို အလယ်မှာစုထားတဲ့ပုံစံ လုပ်ထားပြီး၊အဲဒီမှာကြိုးကိုအရစ်ရစ်ပတ်ထားတယ်) အားလုံး ပတ်ထားပြီး၊
ဓါတ်ပုံနဲ့ တကွမရှင်းပြရတော့ ဘူးပေါ့ရှင်...။ နောက်တခါနော့်...:)
ကဲ..ကျမအဒေါ်တွေကြီးကြီးတွေက စားနေပြီ...။ခေါက်ဆိန့် နဲ့ ကောက်ညှင်းပေါင်း နမ့်ဖစ်ပေါ့...။
ခြံအပြင်ဖက်မှာ ခေါက်ဆိန့် အိုးရှိတယ်..။ဒီတခါတော့ ကျမရဲ့ မိတ်ဆွေတွေကိုပြချင်တာနဲ့ မရောင်မလည်
ရောက်အောင်သွားပြီး (ဖုံးနဲ့ ပါဘဲ) မှတ်တမ်းလေးတင်ခဲ့ပါတယ်...။
ခေါက်ဆိန့် တောင်းတွေနဲ့ ရွှေပဲရွှက်....လင်ပန်းတချပ်ကို ၃ စီပန်းကန်ထဲ့ပါတယ်။
ဒါဟိုးတခါ..ကျမရဲ့ ပို့ စ်တခုမှာရှင်းပြထားတဲ့ ခေါက်ဆိန့် ကို "ထန်"တာလေ..။
မုန့် ဖတ်ကအေးနေတော့ ဟင်းရည်နဲ့ နွေးပြီးပျော့အောင်လုပ်တဲ့သဘောပါ..။
ယောက်မ တဇွန်းဆို တပန်းကန်နီးပါး ဟင်းရည်ရပါတယ်...။
အဲ..သူတို့ ကကျမကိုပြောကြတယ်..နင်က ဟင်းရည်အိုးဘဲရိုက်တယ်..။
ငါတို့ ကိုကျတော့ ဓါတ်ပုံမရိုက်ပေးဘူးလား..တဲ့...။ကဲ...ကြည့်ကြပါအုံးရှင်..ဟင်းရည်အိုးကြီးနဲ့ 
စားရင်ဌက်ဖျားကာကွယ်တယ်ဆိုလား....) လူတွေတရုန်းရုန်းနဲ့ ပေါ့....
နောက်တခုက နေ့ လည်ဆွမ်းကပ်တာ၊ဦးလေးဆုံးတာ၁ဝနှစ်ပြည့်(အမေ့ညီမရဲ့ ယောက်ကျား)။
ကျမမအားလို့ မလာတော့ဘူး...လို့ ပြောတာစိတ်ဆိုးကြတယ်လေ...။
ရေစက်ချတာ..ကြေးသွန်းရေစက်ချခွက်နဲ့ က ကျမအဒေါ်...။
ဒီတော့ပြေးပြေးလွှားလွှား..နဲ့ ..ရောက်အောင်သွားလိုက်ပါတယ်၊ခြေတော်ရာစေတီမှာ လုပ်တာ...။
နောက်တခုကျတော့ အမေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေ..ရဲ့ သားမင်္ဂလာဆောင်။
အိမ်လာဖိတ်တော့ခပ်တည်တည်နဲ့ မေးလိုက်တယ်..သမီးလည်းလာလို့ ရလား..ပေါ့...။
စားပွဲဝိုင်းတခုကို ၁ဝယောက်ထိုင်ရတဲ့ တရုတ်ထုံးစံစားပွဲဆိုတော့ ကျမတို့ ကဆွေမျိုးတသိုက်နဲ့ချိန်းပြီးသွားတာပေါ့။တူမလေးနဲ့ ညီမ အမတွေက ကျမဓါတ်ပုံရိုက်တာကိုရှက်လို့ တဲ့..အတင်းဆွဲကြတယ်..။
ခမျာလည်းကြာကြာမနေရရှာပါဘု့ ...ဆွေတော်မျိုးတော်တသိုက်ကြားမှာ ဖြိုက်ကနဲ ပေါ့...အနိစ္စ..အဟိ။
ခရစ်မမတ်ရောက်တော့ အမဝမ်းကွဲက စားကြောတခုကနေပြန်လာပြီးပြောပါတယ်။
ကျမရဲ့ ဆရာမတယောက် အပြင်ရောက်တာ ၂ရ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ.။ထိုင်းမှာ ကျမနဲ့ တခါဆုံဖူးတယ်။
မဖ်ိတ်ပေမဲ့သူ့ ကိုချစ်ရင် ဒီကောင်မလေး လာရမယ်ဆိုဘဲ....။
ဟား..အပြေးကလေး..ပေါက်ချသွားတာပေါ့...။ဆရာမအိမ်နဲ့ ကျမတို့ က..နဲနဲဝေးတယ်။
ရောက်တာနဲ့ ခေါက်ဆိန့် ဇလုံကြီးကိုလည်းကြည့်ပါအုံး..အယ်စတုံ...:))
နောက်ပြီး ဝက်သားချဉ်ထမင်း(နေ့ ဆွမ်)...စားနိုင်တော့ဘူးနဲနဲဘဲမြည်းမယ်ဆိုပြီး...။
ကောင်မလေးက အော်စီမှာကျောင်းတက်ရင်း..မြို့ ကပါဘဲတရုတ်ကောင်လေးနဲ့ တွေ့ ...တာတဲ့...။
နောက်တခါ..ကျမဆရာမလည်းဟုတ်၊အမျုိုးလည်းတော်တဲ့ ဆရာမတာမွန်း ဆီလည်လည်သွား၊
ဘယ်လိုဘာသာပြန်ရပါ့... ရှမ်းလို "ခေါင်ဝပ်"...။ ထားပါတော့လေ....။
ဒီလို တနှစ်တခါ ကျိုင်းတုံမြို့ နယ်တခုလုံးမှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ပွဲကျင်းပမဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ
တမြို့ လုံးလာသမျှလူတွေကို ထမင်း ကျွေးတယ်..။
အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွှေး၊အထူးသဖြင့် တောင်းရမ်းစားသောက်တဲ့သူတွေရောဝင်ထိုင်စားလို့ ရပါတယ်။
ဟင်းတွေကအစုံဘဲ...ကျမတို့ ရောက်တော့နောက်ကျနေပြီ၊အ်ိမ်ကအလုပ်သမား ထမင်းစားနားချိန်
တချို့ ကဟင်း ၂ပွဲယူထားတယ်လေ...။စားတော့ ၂ယောက်လောက်ဘဲ...။
သွားတောင်းပါတယ်(အရှက်ကိုမရှိ ပါဘူး...:P) နဲနဲလောက်မျှပါလား ကျမလည်းစားချင်လို့ ပါလေ၊ ဆိုပြီးတော့ပေါ့..။ညီမလေးဝမ်းကွဲက အတင်းလိုက်ဆွဲတယ်...ဘာရမလဲ..မယ်ငီးကွ..။
နောက်တော့ ကျမကိုတွေ့ တာနဲ့ သူများတွေ ဟင်းလာပို့ ပါတယ်..။
ဘုန်းကြီးကျောင်းအရည်အတွက်လိုက်ပြီး အလှူခံခွက်ထဲ အလှူငွေထဲ့...။
ကျမတို့ ဆီကဘုန်းကြီးကျောင်းတွေသွားရင် ထမိန်၊လုံချည်ဝတ်ကိုဝတ်ရတယ်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းလာတာ..လက်ပြတ်၊ဂျိုင်းပြတ်နဲ့ ညအိပ်ဝတ်လိုပုံစံဂါဝန်ကြီးနဲ့ ၊စိတ်ပျက်စရာ...။
ဟိုမှာဆိုအသေကဲ့ရဲ့ ကြမှာ..မိဘကမသွန်သင်ဘူးလားလို့ ပြောမှာဘဲ...။
ကျမတူမလေးက ဝက်သားချဉ်မစားရလို့ စိတ်ကောက်တာ..ဝယ်ပေးရတယ်လေ...။
ကျမရေးမယ်ပြောမယ်နဲ့ ...ဂတိတွေပေးထားပြီး ကြောင်တောင်ကြီးနဲ့ မေ့နေတာလေ...:)
Posted by မီးမီးငယ် at 12:52 PM
စူးနှယျလေး June 21, 2013 3:00 PM
အဲ့အိမ်က ခေါက်ဆင့်က ဟောင်ကောင်သားနဲ့လား မမီးငယ်... ဟိ..
ကျိုင်းတုံ အစားအစာတွေ ကြိုက်တယ်
မီးမီးငယ် June 23, 2013 11:52 AM
Anonymous June 22, 2013 12:03 AM
မိုးငွေ့........ June 22, 2013 3:51 AM
စုံပလုံစိနေတာပဲ မမီးရေ...အကုန်လုံးကိုဖတ်သွားကြည့်သွားသရေကျသွားပါတယ်...မစားရတာကခက်တယ် တကယ်ပဲ ..။
မီးမီးငယ် June 23, 2013 11:55 AM
ဒါနဲ့ မိုးငွေ့ ကျိုင်းတုံဘုန်းကြီးကျောင်း(ရန်ကုန်မှာရှိတယ်)၊
အဲကွန်းအခန်းထမင်းစားဆောင်မှာဒူးလေးနန့် ပြီးတီးလို့ ရတယ်။
ဟန်ကြည် June 22, 2013 7:11 AM
ကွယ် သည်တစ်နွေတော့ ရှမ်းပြည်ဘက်ကို သွားဖြစ်အောင် သွားဦးမှပါပဲ...ပုံတွေကြည့်ရတာနဲ့တင် မရိုးမရွဖြစ်လာပြီ...သူရို့မင်္ဂလာဆောင်ကလည်း အနိပ်သား...စားစရာတွေ တပုံတပင်နဲ့...သည်ပြည်နယ်မှာဖြင့် မင်္ဂလာဆောင်လိုက်တိုင်း ရေခဲမုန့်နဲ့ ကိတ်...မစားဘဲနဲ့ ပြန်လာခဲ့ရတာချည်း...
မီးမီးငယ် June 23, 2013 12:18 PM
မင်္ဂလာဆောင်တွေကဟင်းပွဲအနဲဆုံး ၅မျိုး ကနေ ၇မျိုး ၉မျိုး၊
ဒီလိုကျွေးကြတယ်..။ အရင်ကဆို ၁ဝ မျိုးဗျ....။
ဟိုကျ..မုန့် နဲ့ ကာဖီတဲ့၊မုန့် ကလည်းခွဲတမ်းရှိသေးတယ်..။
ပထမဦးဆုံးအတွေ့ အကြုံပါဘဲ..အိမ်ပြန်တော့၊ ညဈေးကရှမ်းဆိုင်မှာထမင်းဝင်စားပြီးပြန်ရတယ်....
San Htun June 22, 2013 7:57 PM
ဂလု..ဂလု..မမီးနဲ့အတူ အပြေးအလွှားလိုက်ပြီး စားရတာ မောလိုက်တာ..း) ရှမ်းအစားအစာတွေက ကောင်းမှကောင်းပဲ ...ဒီတခေါက် မြန်မာပြည်ပြန်ရင် ကျိုင်းတုံဖက် သွားလည်ဦးမှ..ရှမ်းတွေက ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းတယ်..များများရေး မမီး..ဒါမှ ရှမ်းစာ၊ ရှမ်းဓလေ့တွေ သိရမှာ..းP
မီးမီးငယ် June 23, 2013 12:22 PM
Anonymous June 23, 2013 12:51 PM
မီးမီးငယ် June 25, 2013 9:28 AM
Anonymous June 25, 2013 3:28 AM
Daw Mee Yae!
I'm really interested about your ခေါက်ဆိန့် ဂျိန်း(မ်).
You used to say that"ကျမရဲ့ ခေါက်ဆိန့် ပန်းကန်...ကောက်ညှင်းလေးနဲ့ ခိ့ပါတို့ ၊တချက်လောက်ဝါးပြီး ခေါက်ဆိန့် တကော်လောက်၊ပါးစပ်ထဲရှလွတ်..."...woh.......I really love that taste and planning to try to cook but I don't know how to.
Can you tell me how to or can you reference some other link......
By the way you should beapresenter who perform Shan
Traditional Food Program...
မီးမီးငယ် June 25, 2013 9:27 AM
ကျိုင်းတုံမုန့် တီချက်တဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့ တယ်။
Anonymous June 25, 2013 10:17 PM
oakkar7 June 27, 2013 1:28 AM
ကိုရီးယားရေညှိပြားများ ဘာဟုတ်လဲ.. ကိုယ့်ဆီမှာ ရိုးရာအစာတွေ ဒီလောက်များတာ
မီးမီးငယ် June 29, 2013 7:49 AM
OkieDokie June 27, 2013 5:24 PM
I am sure you are No.1 eating machine who got unbelievable appetite. Gee... keep eating.
မီးမီးငယ် June 29, 2013 7:56 AM
you are the only one who know me in real world.
I want to ignore outside world,so I create my own place here and I am happy to share all my happy events sure including eating.
The other topic are away from my skill :P
you better give your time to visit my blog ...ok